Roobab Khasaare Gaystay oo Ka Da’ay Soomaaliya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Roobab Khasaare Gaystay oo Ka Da’ay Soomaaliya
Roobab Khasaare Gaystay oo Ka Da’ay Soomaaliya
Roobabkii guga ayaa ka da’ay inta badan degaamadda Soomaaliyeed. degaamada roobabka xoogani ka da’een waxaa ka mid ah goboladda waqooyo ee Somaliland, Puntland iyo Goboladda bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Roobab mahiigaan ah oo ka da’ay magaaladda Hargeysa waxaa ku dhintay shan ruux, halka ay sagaal kalena ku dhaawacmeen. waxaa khasaare soo gaaray guryo badan oo ku dumay roobabka.
Degaamada Puntland, roobab ka da’ay ayaa sababay dhimashada 3 caruur ah iyo hooyadood. Degmada Baran waxaa roobabku dumiyeen 40 guri, halka degmada carmo ay ku dumeen 11 guri oo ay lahaayeen dad danyar ah.
wararka qaarkood waxay sheegayaan in roobku uu khasaare u gaystay qoysas tiro badan oo xoolahoodii ay daadad iyo biyo soo rogmaday ay qaadeen. Qoysaskaasi ayaa ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada bari, Sanaag iyo Karkaar
Sidii kale, roobabku waxay dhibaato xoog leh gaarsiiyay wadada laamiga ee isku xirta Bosaso Garoowe, iyadoo la soo sheegayo in buundooyinka qaarkood ay waxyeelo ka soo gaartay roobabka.
Roobabkan biyo dhigo ah ee lagu qabowsay ayaa da’ay xili dalku uu ku jiray abaaro laga cabsi qabay inay saamayn ku yeeshaan xoolaha iyo dadka soomaaliyeed ee miyiga iyo magaaladaba ku nool.